समाचार- Page 535 of 693 - Online Majdoor
केटाकेटीका प्रिय सी चिनफिङ
पेइचिङ, १ जुन । संसारकै उदयीमान शक्ति चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दैनिक व्यस्तताको कुरा गरी साध्य छैन । तर, उहाँले चीनको भविष्य स–साना केटाकेटीसँग भेटघाट गर्ने समय भने व्यस्त समय तालिकाबीच...
पुलिसद्वारा आर्मी ५० रनले पराजित
काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लवले त्रिभुवन आर्मी क्लवलाई ५० रनले पराजित गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले...
पुख्र्यौली पेसामा आत्मनिर्भर रहने दलित सङ्कटमा
धनबहादुर भण्डारी डडेल्धुरा, १८ जेठ । पुख्यौली पेसामा आत्मनिर्भर रहेका दलित समुदायका मानिस सङ्कटमा परेका छन् । पुस्तौँदेखि परम्परागत पेशामा आत्मनिर्भर रहेको सो समुदायका मानिस पछिल्लो समयमा कच्चा पदार्थ नपाउँदा सङ्कटमा...
‘डिजिटल फोटोग्राफी’ सार्वजनिक
भक्तपुर, १८ जेठ । फोटोग्राफर शरद राईको पाँचौँ पुस्तक डिजिटल फोटोग्राफीको शनिबार विमोचन भएको छ । एड्भान्स फोटोग्राफी गु्रपको आयोजनामा सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष...
ख्वपमा बिदाइ कार्यक्रम
भक्तपुर, १८ जेठ । ख्वप कलेजमा अध्ययनरत बीबीएस र बीएस्सी चौथो वर्षका विद्यार्थीहरूको बिदाइ तथा मार्गनिर्देशन कार्यक्रम शनिबार कलेजमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित)...
कृषि उत्पादनमा सहकारीको भूमिका नगन्य
राजाराम कार्की काठमाडौँ, १८ जेठ । सहकारीमा बजेट बढ्दै गए पनि कृषिको परनिर्भरता भने चुलिँदै गएको छ । राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरे पनि कृषि उत्पादनका...
भक्तपुर, १८ जेठ । वागीश्वरी कलेज अर्थशास्त्र विभागको आयोजनामा शनिबार आव २०७६/७७ को बजेटबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममानेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले चालू आव...
शिक्षाविद् स्व. मास्केको पुस्तक तीन भाषामा प्रकाशित
काठमाडौँ, १८ जेठ । पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने जो कोही विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी भाषाको पाठ्यक्रममा एउटा पाठ पढ्नुपर्छ, त्यो हो ‘अ पेन फ्रेण्ड टु गम्भीरमान’ ।यो पाठ पढ्ने...